परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू: परमेश्‍वरको कामलाई चिन्‍नु | अंश १५६ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
दर्शनहरूमा संलग्‍न कुराले प्राथमिक रूपमा परमेश्‍वर स्वयमको कार्यलाई जनाउँछ र अभ्यासमा संलग्‍न कुरालाई मानिस स्वयमले गर्नुपर्छ र परमेश्‍वरसँग यसको कुनै सम्‍बन्ध हुँदैन। परमेश्‍वरको कार्यलाई परमेश्‍वर स्वयमले पूरा गर्नुहुन्छ, र मानिसको अभ्यासलाई मानिस आफैले हासिल गर्छ। जुन कुरा परमेश्‍वरद्वारा गरिनुपर्छ त्यो मानिसद्वारा गरिनु आवश्यक छैन, र मानिसद्वारा अभ्यास गरिनुपर्ने कुरा परमेश्‍वरसँग सम्‍बन्धित छैन। परमेश्‍वरको कार्य उहाँको आफ्‍नै सेवकाइ हो र मानिससँग यसको कुनै सम्‍बन्ध छैन। यो कार्य मानिसद्वारा गरिनु आवश्यक छैन, यसको साथै, परमेश्‍वरद्वारा गरिनुपर्ने कार्य गर्न मानिस असक्षम हुनेछ। मानिसले अभ्यास गर्नु आवश्यक रहेको कुरालाई मानिसले नै पूरा गर्नुपर्छ, चाहे यो उसको जीवनको बलिदान होस् वा गवाहीको रूपमा खडा हुनको लागि आफैलाई शैतानको हातमा सुम्पने कार्य नै होस्—यी सबैलाई मानिसले नै पूरा गर्नुपर्छ। आफूले पूरा गर्नुपर्ने सबै काम परमेश्‍वर स्वयमले पूरा गर्नुहुन्छ र मानिसले गर्नुपर्ने कुरा मानिसलाई देखाइन्छ र पूरा गर्नको लागि बाँकी काम मानिसकै लागि छोडिन्छ। परमेश्‍वरले थप काम गर्नुहुन्‍न। उहाँले आफ्‍नो सेवकाइभित्रको काम मात्रै गर्नुहुन्छ र मानिसलाई बाटो मात्रै देखाउनुहुन्छ र बाटो खोल्‍ने काम मात्रै गर्नुहुन्छ अनि बाटो तयार गर्ने काम गर्नुहुन्‍न; यस कुरालाई सबैले बुझ्‍नुपर्छ। सत्यतालाई अभ्यास गर्नु भनेको परमेश्‍वरको वचनलाई अभ्यास गर्नु हो र यो सबै नै मानिसको कर्तव्य हो, मानिसले गर्नु पर्ने कुरा हो र परमेश्‍वरसँग यसको कुनै सम्‍बन्ध छैन। यदि परमेश्‍वरले पनि मानिसले जस्तै सत्यतामा कष्ट र शोधनको पीडा सहनुपर्छ भनेर मानिसले माग गर्छ भने, मानिस अनाज्ञाकारी भएको छ। परमेश्‍वरको काम भनेको आफ्‍नो सेवकाइ गर्नु हो र मानिसको कर्तव्य भनेको कुनै पनि प्रतिरोधविना नै परमेश्‍वरका सबै मार्गदर्शनलाई पालन गर्नु हो। परमेश्‍वरले जुन किसिमले काम गर्नुभए तापनि वा उहाँ जसरी जिउनुभए तापनि, आफूले हासिल गर्नुपर्ने कुरालाई मानिसले पूरा गर्नैपर्छ। परमेश्‍वरले मात्रै मानिसहरूलाई मागहरू दिन सक्‍नुहुन्छ अर्थात् मानिसलाई मागहरू दिनको लागि परमेश्‍वर मात्रै योग्य हुनुहुन्छ। मानिससँग कुनै पनि विकल्‍प हुनुहुँदैन र पूर्ण रूपमा समर्पित भएर अभ्यास गर्नेबाहेक उसले केही पनि गर्नुहुँदैन; मानिसमा हुनुपर्ने चेतना यही नै हो। परमेश्‍वर स्वयमले गर्नुपर्ने काम पूरा भएपछि, मानिसले यसलाई चरणबद्ध रूपमा अनुभव गर्नु आवश्यक हुन्छ। यदि परमेश्‍वरको सारा व्यवस्थापन पूरा भएपछि, अन्त्यमा, मानिसले परमेश्‍वरले माग गर्नुभएको कुरा मानिसले गरेको छैन भने, मानिसलाई दण्ड दिइनुपर्छ। यदि मानिसले परमेश्‍वरका मागहरूलाई पूरा गर्दैन भने, यो मानिसको अनाज्ञाकारीताको कारणले हो; यसको अर्थ परमेश्‍वर आफ्‍नो काममा पर्याप्त रूपमा विस्तृत हुनुभएन भन्‍ने होइन। परमेश्‍वरको वचनलाई अभ्यास गर्न नसक्‍नेहरू, परमेश्‍वरका मागहरूलाई पूरा गर्न नसक्‍नेहरू र आफ्‍नो बफादारीता दिन र आफ्‍नो कर्तव्यलाई पूरा गर्न नसक्‍नेहरू सबैलाई दण्ड दिइनेछ। आज, तिमीहरूले पूरा गर्नुपर्ने भनेका थप मागहरू होइनन् तर मानिसको कर्तव्य हो र सबै मानिसहरूले गर्नुपर्ने कार्य हो। यदि तिमीहरू आफ्‍नो कर्तव्यलाई पूरा गर्न वा यसलाई राम्ररी गर्न समेत असक्षम छौ भने, के तिमीहरूले आफैमाथि समस्या निम्त्याइरहेका छैनौ र? के तिमीहरूले मृत्युलाई बोलाइरहेका छैनौ र? कसरी तिमीहरूले अझै पनि भविष्य र आशाहरू पाउने अपेक्षा गर्न सक्यौ? परमेश्‍वरको कार्य मानवजातिको खातिर गरिन्छ र मानिसको सहकार्य परमेश्‍वरको व्यवस्थापनको खातिर दिइन्छ। परमेश्‍वरले आफूले गर्नुपर्ने सबै कुरा गरिसक्‍नुभएपछि, मानिसले आफ्‍नो अभ्यासलाई खुला मनले गर्न र परमेश्‍वरसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ। परमेश्‍वरको कार्यमा, मानिसले कुनै पनि प्रयास गर्नुहुँदैन, उसले आफ्‍नो बफादारीता दिनुपर्छ र विभिन्‍न धारणाहरूमा लुप्त हुने वा निष्क्रिय बसेर मृत्यु पर्खिने गर्नुहुँदैन। परमेश्‍वरले मानिसको लागि आफैलाई बलिदान दिन सक्‍नुहुन्छ, तब मानिसले किन परमेश्‍वरलाई आफ्‍नो बफादारीता दिन सक्दैन? मानिसप्रति परमेश्‍वर एउटै हृदय र मनको हुनुहुन्छ, तब मानिसले किन सानो सहकार्य दिन सक्दैन? परमेश्‍वरले मानवजातिको लागि काम गर्नुहुन्छ, तब मानिसले किन परमेश्‍वरको व्यवस्थापनको खातिर आफ्‍ना केही कर्तव्यलाई पूरा गर्न सक्दैन? परमेश्‍वरको काम यति हदसम्‍म आइसकेको छ, तैपनि तिमीहरू हेर्छौ तर काम गर्दैनौ, तिमीहरू सुन्छौ तर हलचल गर्दैनौ। के यस्ता मानिसहरू अनन्त विनाशका पात्रहरू होइनन् र? परमेश्‍वरले पहिले नै आफ्‍नो सम्पूर्णता मानिसलाई समर्पित गरिसक्‍नुभएको छ, तब आज किन मानिस इमानदारीताको साथ आफ्‍नो कर्तव्य पूरा गर्न असमर्थ छ? परमेश्‍वरको लागि, उहाँको कार्य नै उहाँको पहिलो प्राथमिकता हो र उहाँको व्यवस्थापनको काम नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मानिसको लागि, परमेश्‍वरको वचनहरूलाई अभ्यास गर्नु र परमेश्‍वरका मागहरूलाई पूरा गर्नु उसको पहिलो प्राथमिकता हो। यो तिमीहरू सबैले बुझ्‍नुपर्छ। तिमीहरूलाई बताइएका वचनहरू तिमीहरूको सारको केन्द्रबिन्दुमा नै पुगेको छ र परमेश्‍वरको कार्य अभूतपूर्व क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ। धेरै मानिसहरू अझै पनि सत्यता वा यो बाटोको झूटलाई बुझ्दैनन्; तिनीहरू अझै पनि प्रतीक्षा गरिरहेका छन् र हेरिरहेका छन् र आफ्‍नो कर्तव्यलाई पूरा गरिरहेका छैनन्। बरु, तिनीहरूले परमेश्‍वरको हरेक वचन र कार्यलाई छानबिन गर्छन्, तिनीहरू उहाँले के खानुहुन्छ र के लाउनुहुन्छ भन्‍ने कुरालाई ध्यान दिन्छन् र तिनीहरूका धारणाहरू अझै सोचनीय बन्छन्। के त्यस्ता मानिसहरूले व्यर्थमा चासो देखाइरहेका छैनन् र? तिनीहरू कसरी परमेश्‍वरलाई खोजी गर्ने मानिसहरू हुन सक्छन्? र तिनीहरू कसरी परमेश्‍वरमा समर्पित हुनको लागि अभिप्राय राख्‍ने मानिसहरू हुन सक्छन्? तिनीहरूले आफ्‍नो बफादारीता र कर्तव्यलाई आफ्‍नो मनको पछाडि राख्छन् र परमेश्‍वरको अवस्थितिमा ध्यान केन्द्रित गर्छन्। तिनीहरू एक आक्रोश हो! यदि मानिसले आफूले बुझ्‍नुपर्ने सबै कुरालाई बुझेको छ, र अभ्यास गर्नुपर्ने सबै कुरालाई अभ्यास गरेको छ भने, परमेश्‍वरले अवश्य नै मानिसमाथि आफ्‍ना आशिषहरू प्रदान गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँले मानिसबाट माग गर्नुहुने कुरा भनेको मानिसको कर्तव्य हो र मानिसले गर्नुपर्ने कुरा हो। यदि मानिस आफूले बुझ्‍नुपर्ने कुरालाई बुझ्‍न असक्षम छ भने र अभ्यास गर्नुपर्ने कुरालाई अभ्यास गर्न असक्षम छ भने, उसलाई दण्ड दिइनेछ। परमेश्‍वरसँग सहकार्य नगर्नेहरू परमेश्‍वरप्रति वैमनस्यतामा छन्, नयाँ कामलाई स्वीकार नगर्नेहरू यसको विरोधमा छन्, यदि त्यस्ता मानिसहरूले केही गरेनन् भने पनि तिनीहरू स्पष्ट रूपमा यसको विरोधमा छन्। परमेश्‍वरले माग गर्नुभएका सत्यतालाई अभ्यास नगर्नेहरू जानी-जानी विरोध गर्नेहरू र परमेश्‍वरका वचनहरूप्रति अनाज्ञाकारी हुनेहरू हुन्, चाहे तिनीहरूले पवित्र आत्माको कार्यलाई विशेष रूपमा ध्यान नै किन नदिऊन्। परमेश्‍वरका वचनहरूलाई पालन नगर्ने र परमेश्‍वरमा समर्पित नहुने मानिसहरू विद्रोहीहरू हुन् र तिनीहरू परमेश्‍वरको विरोधमा छन्। आफ्‍नो कर्तव्यलाई पूरा नगर्ने मानिसहरू परमेश्‍वरसँग सहकार्य नगर्ने मानिसहरू हुन् र परमेश्‍वरसँग सहकार्य नगर्ने मानिसहरू पवित्र आत्‍माको कार्यलाई स्वीकार नगर्ने मानिसहरू हुन्।